Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » SAAD oo deeq Raashin ah gaadhsiisay Tuulada Huurso ee G/Sitti(Sawiro)
SAAD oo deeq Raashin ah gaadhsiisay Tuulada Huurso ee G/Sitti(Sawiro)
September 10, 2012 - Written by xaajo jijiga - Edited byxaajo
Hay,adda gar gaarka & Horumarinta Deegaanka Soomaalida Itoobiya ee (SAAD)oo gacan ka helaysa Hay’adda Horn of Africa Development & Education Foundation [HADEF] – USA oo ah Hay,ad samafal ah oo ay leeyihiin Jaaliyada DDSI ee kunool dalka USA ayaa Deeq Raashin ah gaadhsiiyay dad danyar ah oo ku dhaqan Tuuladda Huurso ee Degmada Erar ee Gobolka Sitti.
Deeqdan Raashinka ah ayaa ahayd mid isugu jirtay Bariis & Saliid waxaana loo qaybiyay Qoysas kor u dhaafaya ilaa 130 Qoys oo ah kuwii ugu liitay Dadkii Danyarta ahaa ee Tuuladaasi ku Dhaqnaa.
Masuuliyiin ka socotay Hay’adda SAAD oo la hadlayay warbaahinta ayaa tilmaamay Muhiimadda ay u leedahay Maanta Raashinkan ay soo gaadhsiiyeen Dadkan danyarta ah, waxaana ay sheegeen in ay aad ugu faraxsanyihiin SAAD oo waxqabadkeeda gaadhsiisay guud ahaan Degaanka.
Arintan ayaa timid kadib markii Codsi ugu yimid bulshada uu soogaadhay Hay,adda SAAD oo ay kaga Codsanayeen in Dadkani Danyarta ah wax uun lala soogaadho taas oo islamarkiiba u suuro gashay Hay,adda SAAD in ay si dhaqsa ah kaga Jawaabto.
Hayadda HADEF oo ah hay’ad ka diwaangashan dalka Maraykanka ayaa waxey ka hawlgashaa geeska Afrika gaar ahaan gayiga Afka Soomaaliga looga hadlo waxayna si gaar ah u taageertaa dadka tabaaleysan iyadoo takhasus gaar ah u leh hormarinta waxbarashada. Hayadda SAAD ayaa hoy lagu soo hirto u noqotay dhamaan hay’adaha ay horseedayaan Qurba joogta deegaanka kasoo jeeda ee raba iney dalka iyo dadka waxtaraan.